Mbola betsaka no tsy mahalala ny faingosela na ny drepanositozy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Raharinirina Lalaina il y a 1 année
Araka ny fanadihadiana natao dia 10%-n’ny mponina eto Madagasikara dia mitondra io aretina faingosela io ary 18,5% izany dia amin’ny faritra atsinanan’ny Nosy.
Ny atao hoe faingosela na drepanositozy
Mbola maro ireo tsy mahafantatra ny aretina faingosela. Ny faingosela dia tsy fahatomombanan’ny selamena ka noho ny fisian’ny taharomena S ao aminy no mahatonga azy hiova endrika. Mety hanentsina ny lalan-drà na ho potika mialohan’ny fotoana ary mahatonga ilay marary tsy ampy rà ary koa hiteraka fahavoazan’ny taova maro izany tranga izany. Aretina manaranaka ny faingosela ary izy no anisan’ny betsaka indrindra voatily maneran-tany.
Misy ny fisorohana an’ity aretina ity amin’ny alalan’ny fandraisana an-tanana aloha indrindra sy ny fahaiza-mitondra tena ka hahatonga ireo faingosela hiaina tahaka ny olona rehetra. Ny fitsaboana ireo marary tratry ny fahasarotana manko dia tena sarotra sy maharitra ary andaniana fotoana sy harena, miantraika amin’ny saina mihitsy aza. Mbola maro anefa ny mitondra ity tarazo ity no tsy mahalala akory izay tokony hataony.
Misy ny azo atao ho fisorohana sy fitsaboana
Noho ireo antony ireo dia nandrafitra paik’ady nasionaly ho an’ny ady atao amin’ny faingosela ity ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin’ireo mpiantsehatra rehetra miady amin’ny faingosela.
Fampihenana ny tranga sy ny taham-pahafatesana vokatry ny faingosela no tanjona amin’izao ezaka izao. Ireto no paikady amin’izany :
- manolotra fahalalàna momba ny faingosela,
- manamora ny fitiliana,
- manome tolotra ara-pahasalamana sahaza ho an’ireo marary.
Manaraka izany ny fandrindrana tsara ny ady atao amin’ny alalàn’ny fikarohana ireo mpiara-miasa sy ny ho enti-manana.
Zava-dehibe ny fiaraha-mientan’ny rehetra amin’ny ady atao amin’ny aretina tahaka izao. Tsy tokony hisalasala hanao fitiliana ny tsirairay ahafahana mandray andraikitra raha sanatria ka tratry ny aretina, rehefa tsy voa dia efa tombony izay. Ny fahafantarana ny marina no ahafahana manapa-kevitra amin’izay tokony hatao fa tsy ny honohono izay vao mainka manakorontana.